दिव्यदीप दहाल – मझेरी डट कम
मानसरोवर, तीर्थपुरी तथा कैलाश परिक्रमा एक परिचय
१ परिचयः मानसरोवर तीर्थ चीनको स्वशासित तिव्वतमा पर्दछ । मानसरोवरयात्रा लाने कुनै ट्राभलमा तोकिएको शुल्क दिए पछि आ-आफ्नो पासपोर्ट उक्त ट्राभलमा जम्मा गर्नु पर्छ । १०/१५ दिनपछि सामूहिक भिसा लागेर आएपश्चात जान पाइन्छ । विभिन्न ट्राभल्सहरू छन् जस्तो नमस्ते होलिडे टूर एण्ड ट्रेक प्रा लि, हिमालय टुर एण्ड ट्राभल आदि । १० देखि १२ दिनसम्मको यात्रा हुन्छ ।
Read More »मानसरोवर, तीर्थपुरी तथा कैलाश परिक्रमा एक परिचय
हाम्रो नेपाली भाषामा कुनै यस्ता शब्दहरू चलन चल्तीमाछन् जसको भावार्थ बुझिन्छ तर ठेट अर्थ देखिदैन । जस्तो “झ्याउ” यसको ठेट अर्थ रुख बिरुवामा पाइने एक प्रकारको बाहिरी झुस हो । यो खासै काममा आउदैन । कुनै विशेष उत्सवमा सजावटको लागि मुख्य द्वारहरुमा हरियालीकोलागि वनबाट ल्याएर प्रयोग गरिन्छ । यस बाहेक यो न दवाइ न दाउरा न मल न घाँस न रङ्गको रुपमा नै प्रयोगमा आउछ । पुरानो र बढी पानी पर्ने स्थानमा यो पाइन्छ ।
हामी सबै मानवसँग मन छ । सबै मानवको एउटै मन हुँदैन । आत्मा र मन फरक कुरा हो । कल्पना गरिने कुरा मनमा हुन्छ । आँखाले देखेको, पढेको, अनुमान गरेका कुराहरू मन भित्रबाट प्रष्फुटन हुन्छन् । त्यसलाई संयोजन गरी विभिन्न भाषामा उतारिन्छ, ती उतारिएका लेखन, छापा वा विद्धुतीय साधनहरुद्वारा हामी बुझ्न सक्छौं कुरा यस्तो रहेछ भनेर । यसलाई छुट्याउन मुश्किल छ कि यो हिमाली, यो पहाडी, यो तराइको मन अथवा देशी वा विदेशी भनेर । दिमाग र मनको सम्बन्ध रहन्छ र त दिमागले सोचेको कुरा मनमा खेल्न थाल्दछ । एउटै मान्छेले कयौं भाषा बोल्दछ, एउटै भाषा मात्र बोल्ने पनि मानिस हुन्छन् । भाषा सिकाइ, पढाइबाट आउँछ तर मन त शुरुदेखि नै हुन्छ । एक प्रकारको शंस्कारबाट अर्को प्रकारको शंस्कारमा गइयो भने, मन बदलिन्छ, हिजोकोभन्दा फरक हुन्छ । ऋतु, संगत र शंस्कार अनुसार मन फरक हुन्छ । क्षेत्र, देश, विदेश, समाज, मौसम र शिक्षा अनुसार बन्दछ यो मन ।
धेरै दिनदेखि मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने इच्छा थियो । सेवाकै शिलशिलामा जब पोखरा आउने मौका मिल्यो तब त्यो इच्छा पूराहुने संभावना बढेर गयो । घरायसी कारणले सोह्र श्राद्ध रोकिएको थियो । दशैमा घरजाने मौका परेकोले तिहार जान नपाइने जस्तो भयो । एकदिन मनमा विचार आयो कागबेनी गएर पित्री तर्पण गर्न कसो होला ? मनमा उठेका सबै कुराहरू पूरा हुंदैनन् र केही हुन्छन पनि । कागबेनीबाट सोह्र श्राद्ध सकेर जीपमासवार पूर्व गृह मन्त्री एवं मुख्य सचिव माधव घिमिरे लगायत परिवारजन आमा दाजुभाइ र अगँरक्षक समेत मुगंलिन नजिक त्रिशुली नदीमा जीप खस्दा असामयिक निधन भएको र चालक हामफाली बाँच्न सफल भएको घटना पनि याद आयो ।
अभावै अभावको दशै २०७२ को छ शुभ कामना
छैन इन्धन, वर पर आफन्तहरूकहाँ, गइ रमाउन
भाउ बेसा दोब्बर भयो, यहाँ सकिएन दशै मनाउन
उता भूकम्प गयो, यता तराइ बन्द, सकिएन चलाउन
तर्क र आशा सवले गरे, खै त आपूर्ती टरेको
परार गयो, पोहोर गयो दशै, योपाली जाने नै भो
न खसी- भेडा, च्याग्रां आयो, न खुले सुपथ पसल
न चले सवारीहरू, न खेती पाती भए सफल
दुख: र मिहनेत गरेर एक छाक राम्रो खान लाउन मात्र हैन, हात कानमा टन्न गहना लगाउन र कालो चस्मा र हिल जुत्ता लगाएर स्कूटीमा घुम्नसम्म पनि कमी गराएका थिएनन गुणा बहादुर भण्डारी (नाम परीपर्तन) भाइले, आफू शिक्षित मात्र भए पनि उनका दाइले, यिनलाई विवाह गर्नु पूर्व राम्रो भारी बोक्न र निरोगी भएकीले पूर्वी पहाड ओखलढुङ्गा तिरकी रेग्मी परिवारकी काम गर्न काठमाण्डौ आएकी भए पनि आफ्ना भाइलाई विवाह गर्न बिचार गरेका थिए । यिन्का परिवार पनि राम्रा वरको खोजीमा त थिदै थियो । तिथि मिति जुर्यो २०५० सालमा । उनी साइली बुहारीको रुपमा सिन्धुपाल्चोकको बन्धनभन्ने गाउमा पुगिन् ।
बाह्र बाह्रैको कामले बित्छ
बाह्रमहिना दिन बाह्रको म त पनाती,
नाती, छोरा, भाइ सबैको हूँ म जाति !!
काखमा जान्छु, खेल्छु हल्लाई हात खुट्टी,
भावले बोल्छु, सुन्छु म त्यो हातको चुट्की ।।
माँको न्यानो काखहरुमा, घुम्ने चाह मेरो,
नराख भइमा, मलाई त्यो चकटी छैन प्यारो ।।
बाह्रै चोटी खान्छु, सुत्छु, उठ्छु बाह्रै प्रहर,
बाह्रै पटक सु-आची हुन्छ नानामा हैन रहर ।।
अफ्रिकाकै कुनै मुलुक यस्ता छन् जुन नेपालभन्दा पनि स्तरीय र मननीय पनि छन् यस्ता देशहरूका भ्रमणले आफ्ना देश र यी देशहरूमा के भिन्नता पाइन्छ भनेर तुलना गर्ने र कमीकमजोरी लाइसुधार गर्ने मौकाहरू पनि पाइन्छन् । यसै शिलशिलामा अगस्त १५ तारिक २००९मा तीनजना नेपाली अधिकृतका टोली भ्रमणमा गएको थियो जसको छोटो वर्णन यहाँ दिएको छ ।
१९ तारिख बिहान ६३० बजे नास्ता खाएर विल तिरी गाडी तय गर्न लाग्यौं । एक जना टेक्सीवालाले ८ हजार सिलिङ्गमा जान्छु भनेको रहेछ पछि किन हो अस्वीकार गरे र अर्को एक जना साथीलाई भने उसले प्रवेश शुल्क बाहेक १५ हजारमा कुरा छिनी उसको पनि दाइको गाडीमा पठाउन उसैको टेक्सीमा लगे, एकै छिनमा यन्धन भर्ने केन्द्रमा रोकियो र केहीबेर कुरेपछि डाईभर कम गाईड अर्कै र गाडी उनको दाइको व्यवस्था गरी झण्डै ०९१५ बजे तिरमात्र मसैमारातर्फ लाग्यो ।
हे मेरो मन तै भन, किन भाग्छस् यसरी घरी घरी ?
किन तं उड्छस्, सधैभरी, यताउता दोब्बर हावासरी ।
उपाय छ त केही, तलाई रोकी यहाँ मनाउने ?
गर्छस् किन बैमानी, लाज नभै दुनिया हँसाउने ?
राम्रोमा नि बस्छस्, धेरै नराम्रोमा रमाउदछस् ।
नौलो चाह तं भित्र, किन झन् झन बढाउछस् ।
शंका छ तं भित्र कति,कति छैन सीमा समाउने ?
आफैलाई छली तं, लुकी लुकी किन रमाउने ?